Dhacdo hadal hayn badan abuurtay oo ka dhacday magaalada Garoowe kadib markii ciidanku ay rasaas ku fureen gaari…
November 28, 2020 Xuseen 6
Puntlandtimes (Garoowe)-Magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland waxaa maanta ka dhacday arrin hadal hayn badan ka abuurtay baraha bulshada kadib markii ciidamada laamaha canshuuruhu ay rasaas ku fureen gaari uu watey wiil dhalinyaro ah.
Kadib muran dhexmaray ciidamada canshuuraha iyo wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Maxamed Abdirisaaq Fidaar ayaa waxaa ciidanku ay saddex xabood ku rideen gaariga wiilka dhalinyarada ah oo aan lahayn calaamadda lagu garto gaadiidka ee Taarikada.
Muran ku aadan dhanka canshuurta kadib ayaa darawalka gaarigu dhaqaaqay taasi oo sababtay in lagu rido saddex xabadood inkastoo uusan khasaare nafeed ka soo gaarin marka laga yimaado dhowr meelood oo ay xabaddu gaariga ka waxyeelaysay.
Darawalka ayaa sheegay in gaarigiisa horay taarikada loogaga furtay agagaarka saldhigga dhexe ee magaalada Garoowe, uuna ogaysiiyey laamaha ammaanka inkastoo uu sheegay inuusan helin garanayna cidda ka furatay ilaa hadda.
Waxay ahayd in uu Amarka qaato oo la xaajoodo ciidanka. Yaa yaqaan in uu yahay argagixiso iyo in kale
Waa danbi wayn inaad ka caraarto hay adaha amniga, America oo aan joogo waaba la toogan lahaa bil xaqiiqa waayo danbiilaha ayaa fakada iyo burcada. Markaa qaladkaa waxaa leh dareewalka gaariga oo qayrul masuul ah.
Arrintaas oo kale haddii ay ka dhacdo waddankaan yurub ka tirsan ee aan joogo waana dambi weyn ciqaab xun ayuu midanayaa waana dhici kartaa la toogto haddii uu ka badbaadana shakiba kuma jiro in uusan waligii dambe gaari wadi doonin waayo waxaa lagu suntayaa qofkaan masuuliyad qaadi Kari.
runti waa khalad in uu laamaha amniga isku dayo inu ka cararo balse waa in uu u hogaansanaadaa una sheegaa sababta ay uga maqantahay taarikadu askarta ruuxadoodu waa qalad iney xabad u adeegsadan weliba meelo khatar ah balse ay ahayd iney taayirada ka banjariyaan waaba hadey xabad isticmaalayaan
Qof khaldan aya wariye farax Geeylan ka dhigaya nin laga khaldan yahay,waxas oo kale in News laga dhigo waxay u’ekan karta war jecli iyo in lawayey wax la bun buniyo oo dadka puntland dhedisa wax lo madmadobeyo.
Sheekadan ama warkan waxbaa ka khaldan.
Inanka yaa gaadhigiisa taarikada ka furtey? Ma si xatooyo ah ayaa gaadhiga oo meel yaala looga furtey? Ma isla ciidamadan ayaa falkaas ku kacay si ay baad uga qaataan inanka iyo gaadhigaba?
Haduuse war geliyay laamaha amniga, intuu gaariga meel dhigo muu doonto taariko kale oo uu soo bedesho? Biley qaar damacsan fal iney ku geystaan taarikadiisa ka furatey?
Khaladbey aheyd inuu gaadhi bilaa taariko ah iska kexeeyo. Khalad kalana wuxuu galay kolkuu gaadhiga iska dhaqaajiyay isagoo ciidamo joojiyeen.
Dhanka kale ciidamadu ma cawaanbaa? Xabadaha gaadhiga lagu dhufanayaa maxey ahaayeen? Gaadhiga dadbaa ku jri kara ama walxo kale oo khatar dhalin kara. Hadeyse rideenba mey kor u ridaan. Taayirda la’eegta xitaa anigu ma idhaahdeen. Waayo taangiga ayay kaga dhici kartaa oo qarax beyba abuuri kartaa.
Iskusoo wada duub. Duruusta ama casharka meeshan laga baran karaa waa in shicibkuna u baahan yahay wacyi gelin iyo xeerarka degsan oo la ogeysiiyo, ciidankuna u baahan yihiin tobobaro dheeraad iyo qalbeyn.